Wasiirka Waxbarashada Goodax Barre oo sheegay in ardayda Puntland aan la siin doonin Shahaadooyin - Jowhar Somali Leader
Home News Wasiirka Waxbarashada Goodax Barre oo sheegay in ardayda Puntland aan la siin...
Wasiirka Waxbarashada Goodax Barre oo sheegay in ardayda Puntland aan la siin doonin Shahaadooyin
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in ardayda degaannada Puntland oo aan ka qeybgelin Imtixaanka Shahaadiga ee ay dowladu qaadeyso aan la siin doonin Shahaadada Dugsiga Sare.
Cabdulaahi Goodax Barre Wasiirka waxbarashada ayaa sheegay in Puntland aysan u diyaar saneyn in ay dadkooda wax la qeyb-sadaan,hayeeshee Dowladda aysan Shahaado siin doonin qof aan ka qeyb-gelin Imtixaanka.
“Dowlada Federalka ma ahan kuwa diidan in ardayda Puntland helaan shahaado,balse aysan xaq aheyn in Shahaado la siiyo arday aan imtixaan gelin,waxaana uu cadeeyay in marnaba Ardayda Puntland aysan heli doonin Shahaahadada Dowladda.”ayuu yiri Wasiir Goodax.
Wasiirka ayaa sheegay in sanadkii hore ay jireen wadahadalo arrintaas xal loogaga gaarayay balse haatan wadahadaladaas aysan muuqan.
Waxana uu Wasiir Goodax ku eedeeyay Maamulka Puntland inay siyaasadeeyeen waxbarashada ardayda ku nool degaannada Puntland.
Sanadkii hore ee 2019 ayaa Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya waxaa ay Shahaadada u diiday ardayda degaannada Puntland taas oo dhalisay xiisad siyaasadeed,balse wadahadallo labada dhinac dhex maray kadib la siiyay.
Dr Xaawo Cabdi oo Saaka ku geeriyootay magaalada Muqdisho